सामसु Galaxy ग्यालेक्सी जे फोल्ड २: स्पेनमा उपलब्धता र मूल्य Androidsis
हामीलाई सामसु Galaxy ग्यालेक्सी जे फोल्ड २ को मूल्य थाहा छ। र तपाईंलाई यो मनपर्दैन
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट २० को प्रस्तुतीकरणको बेला एशियाली निर्माताले हामीलाई आश्चर्यचकित गर्यो नयाँ फोल्डिंग फोन। हामी कुरा गर्छौं ग्यालक्सी जेड फोल्ड २, एक उपकरण जसले हामीलाई क्षेत्रको भविष्यमा ध्यान दिन्छ। अवश्य पनि, धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरू यस प्रकारको उपकरण वहन गर्न सक्षम हुनेछन्।
जे भए पनि सामसुले ग्यालक्सी जेड फोल्ड २ लाई दुई भागमा प्रस्तुत गर्‍यो: पहिलो अगस्ट August मा टर्मिनल देखाउन, र अब हामीलाई देखाउन आधिकारिक रिलीज मिति र यसको मूल्य। र हामी पहिल्यै अनुमान लगायौं कि यो पागल हो।
एउटा मोबाइलका लागि २,००० युरो? यसको मूल्य ग्यालक्सी जेड फोल्ड २,
एक उपकरण जुन क्षेत्रलाई क्रान्तिकारीकरण गर्न चाहान्छ पहिलो पहिलो कार्यात्मक फोल्डिंग फोनहरूको एक प्रस्ताव गरेर। हामीले अहिले सम्म के देख्यौं त्यो अमा प्रोटोटाइपजस्तो थियो सामसु and र Huawei बीच दौड यस्तो उपकरण शुरू गर्ने पहिलो निर्माता हो।
र अब, कोरियाली फर्मले सामसु Galaxy ग्यालक्सी जेड फोल्ड २ को साथ गुणस्तरमा नयाँ उफ्रान लिएको छ, एक उपकरणसहितको उपकरण जसले तपाईंलाई यसको विशेष प्यानलबाट अधिक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं यसलाई सँभाल्न सक्नुहुन्छ, अवश्य पनि ...
केहि भन्दा बढि किनकि सामसु confirmedले यो पुष्टि गरेको छ सामसु Galaxy ग्यालेक्सी जे फोल्ड २ मूल्य यो २,००eयुरो हुनेछ। यो मान्नु पर्दछ कि लचिलो प्यानल निर्माण गर्न धेरै गाह्रो छयस तथ्य बाहेक आन्तरिक कम्पोनेन्टहरूलाई यस तहलाई उपयोगी र टिकाऊ हुन अनुमति दिन धेरै संशोधनहरू आवश्यक पर्दछ। तर कोरियाली निर्माताले अनुरोध गरेको आकृति अत्यधिक छ।
यदि तपाईं यो उपकरण खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने, सैमसंग वेबसाइट मार्फत पहिले नै रिजर्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नुहोस्, यद्यपि पहिलो इकाईहरू सेप्टेम्बर १ 18 देखि वितरण गर्न सुरु हुनेछ। के यो तपाइँको खरीद लायक छ? स्पष्ट छैन, जबसम्म तपाईंसँग एक धेरै भारी जेब छैन, वा तपाईं यस प्रकारको उपकरण पाउन पहिलो हुन चाहनुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » हामीलाई सामसु Galaxy ग्यालेक्सी जे फोल्ड २ को मूल्य थाहा छ। र तपाईंलाई यो मनपर्दैन
गुगल सहायक पहिले नै ,50.000०,००० भन्दा बढि स्मार्ट उपकरणहरूसँग उपयुक्त छ